तपाईंको स्व सुधार पावर अनलक - समाचार नियम
तपाईंको स्व सुधार पावर अनलक
जब हामी एक निश्चित वस्तु हेर्न, उदाहरणका लागि एक चित्रकला हामी यसलाई मा के बुझ्न सक्षम हुने छैन, के चित्रित छ र चित्रकला बस एक इन्च हाम्रो अनुहार टाढा छ भने यो संग अरू के जान्छ. तर यदि हामीले यो एक सानो थप लिन प्रयास, वेल सारा कला काम को एक स्पष्ट दृष्टि छ.
हामी हाम्रो जीवन मा एक बिन्दु पुग्न हामी परिवर्तन र जानकारी को एक पूरी गुच्छा हामीलाई हाम्रो आत्म सुधार शक्ति अनलक गर्न मद्दत गर्नेछ लागि तयार हुँदा. तब सम्म, केही कुरा सही हाम्रो नाक अन्तर्गत हामीलाई घूर हुन सक्छ तर हामी यसलाई देख्न donít. सबै खराब गर्यो गर्दा हाम्रो आत्म सुधार शक्ति अनलक विचार मात्र समय छ. उदाहरणका लागि भ्यागुतो सिद्धान्त लिन
उम्लिरहेको पानी पट मा भ्यागुतो एक राख्दै प्रयास. के हुन्छ? उहाँले twerps! उहाँले बन्द फड्को! किन? उहाँले पानीको तापमान आफ्नो वातावरणमा अचानक परिवर्तन सहन गर्न सक्षम छैन किनभने. त्यसपछि भ्यागुतो बी प्रयास: एक लूका न्यानो पानी उहाँलाई ठाँउ, त ग्यास चुलो बारी. नुन पानी एक निश्चित उम्लनेबिन्दु पुग्छ प्रतीक्षा. त्यसपछि भ्यागुतो बी सोच्छ ìOohÖ hereî मा एक बिट न्यानो ITIS.
मान्छे सामान्य मा भ्यागुतो बी जस्तै हो. आज, अन्ना सोच्छ कार्ल उनको घृणा. भोलि, पैट्रिक उनको सम्म हिँड्छ र तिनलाई भन्नुभयो उहाँले तिनलाई घृणा. अन्ना नै र doesnít मन उनको मित्र उनको के भन्छ रहन्छ. अर्को दिन, त्यो किम र यूहन्ना पनि उनको घृणा गर्नुहुन्छ भनेर सिके. अन्ना doesnít सम्पूर्ण समुदाय घृणा सम्म महत्त्व र आत्म सुधार आवश्यकतालाई एकैचोटि महसुस उनको.
हामी दुखाइ अनुभव गर्दा हामी हाम्रो पाठ सिक्न. कुरा कुनै न कुनै र कठिन प्राप्त गर्दा हामी बल्ल चेतावनी लक्षण र संकेत देख्न. जब हामी आहार परिवर्तन गर्न आवश्यक महसुस गर्छन्? हाम्रो जिन्स र शर्ट को कुनै पनि हामीलाई कहिले फिट हुनेछ. जब हामी कैंडी र चकलेट खाने रोक्न गर्छन्? जब हाम्रो दाँत सबै बन्द खसेको छ. जब हामी धूम्रपान रोक्न आवश्यक महसुस गर्छन्? जब हाम्रो फोक्सोमा खराब गएका छन्. जब हामी प्रार्थना र मदत माग्न गर्छन्? जब हामी weíre भोलि मर्न केहिले भन्ने महसुस.
मात्र समय हामी भन्दा कहिल्यै हाम्रो आत्म सुधार शक्ति अनलक सिक्न सारा संसार दुर्घटनाग्रस्त र झर्ने अलग गरेको छ. हामी विचार र यसलाई परिवर्तन गर्न सजिलो छैन किनभने यसरी महसुस. हामी यसलाई बेवास्ता गर्दा तर परिवर्तन थप पीडादायी हुन्छ.
परिवर्तन हुनेछ, जस्तै यो वा यसलाई घृणा. वा अर्को एक बिंदु मा, हामी सबै हाम्रो जीवन ñ मा विभिन्न परिवर्तन अंक अनुभव गर्न जाँदैछन् र हामी सबै अन्ततः हाम्रो आत्म सुधार शक्ति अनलक जाँदैछन् दुनिया यति भन्छन् किनभने, किनभने हाम्रो मित्र हामीलाई nagging छैन, तर किनभने हामी हाम्रो आफ्नै असल यसको बुझे.
धन्य मानिसहरू परिवर्तन स्वीकार donít, तिनीहरूले अँगालेको. अब, तपाईं आत्म सुधार आवश्यकतालाई साकार अघि एउटा ठूलो गर्मी महसुस गर्न donít. अनलक आफ्नो आत्म सुधार शक्ति म Ami बस बाटो आईआईटीएस भनेर विचार को पिंजरे आफूलाई अप अनलक अर्थ. यो डर र परिवर्तन प्रतिरोध गर्ने मान्छे को लागि यस्तो गरिब क्षमा गर्नुहोस छ. हामी सबैभन्दा कम्प्युटर जस्तै हाम्रो मन कार्यक्रम.
जेन बारम्बार त्यो GUTS छ doesnít भनेर सबैलाई वरिपरि मानिसहरूको समूह हुन बताउँछ. त्यो उनको आमा सुने, उनको बुबा, उनको बहिनी, उनको शिक्षक अन्य मानिसहरूलाई उनको बारेमा नै कुरा. वर्षौंदेखि, कि जेन विश्वास गर्छ के छ. त्यो आफ्नो उनको कथा विश्वास गर्छ. र के हुन्छ? आफ्नो घर भन्दा ठूलो भीड सेना हरेक समय, विद्यालयमा, र समुदायमा ñ त्यो फिर्ता चरण tends, नहट्न र एक कोठा मा आफु माथि लक. जेन मात्र उनको कथा विश्वास didnít, त्यो यो बस्थे.
जेन उनले उनको कथा छ के छैन भन्ने महसुस छ. बरु सबैले सम्झना गर्न को लागि उनको अनुहार वरिपरि उनको कथा पोस्ट भएको, त्यो आत्मा र शो मान्छे एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुँ द्वितीय गर्न छ र म तदनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ!म
स्व सुधार everybodyís मनपर्ने शब्द नहुन सक्छ, तर यदि हामी दृश्य को एक अलग कुरा मा कुरा हेर्न, हामी पूर्णतया सुधार नभएसम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया दिन आनंद सट्टा गणना को ठूलो संभावना हुन सक्छ. जिम मा एक हप्तामा तीन सत्र एक स्वस्थ जीवन परिणाम थियो, बरु porns देख को पुस्तकहरू पढेर अप थप गहन ज्ञान कोर्न हुनेछ, मित्र र साथीहरूले बाहिर जा तपाईं काम देखि फिर्ता एक कदम र खोलन बाहिर द्वीपसमूह मदत गर्नेछ. र बस जब तपाईं आफ्नो आत्म सुधार शक्ति अनलक सम्पूर्ण प्रक्रिया आनन्द उठाइरहेका छौं, youíll youíre कुराहरू प्रकाश लिन र खुसी बन्न थालेका भन्ने महसुस.
← 2015: वर्ष औंठाछाप सेन्सर एक gimmick हुनुको रोकियो हुनेछ 2016 वर्ष भर्चुअल वास्तविकता खेल बन्द लिन्छ हुन? →